အားနာတတ်တာလား? Social Phobia ဖြစ်နေတာလား? - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » စိတ်ကျန်းမာရေး » အားနာတတ်တာလား? Social Phobia ဖြစ်နေတာလား?
အားနာတတ်တာလား? Social Phobia ဖြစ်နေတာလား?
သင်ဟာ တစ်ဖက်သားကို တစ်စုံတစ်ခု ပြောဆိုရမှာ၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရမှာ ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာကို မကြာခန ရှက်ရွံ့စိုးရိမ်မိနေပြီလား။ လူအများအကြားမှာ ပြောရဆိုရ၊ လုပ်ရကိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ စိုးရွံ့လို့နေပြီလား။
သင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ အားနာနေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး Social Phobia များ ဖြစ်နေပြီလား။ ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်နော်။
Social Phobia ဆိုတာ ဘာလဲ
Social Phobia ကို Social Anxiety Disorder လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြပါတယ်။ စိတ်ပညာဘာသာရပ်မှာတော့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် စိတ်လွန်ကဲမှု ဝေဒနာရှင်လို့ ခေါ်ဆိုထားပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုပြီးရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တတိယမြောက်အဖြစ်အများဆုံး စိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Social Phobia ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် လူအများအပြားနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာကို အကြီးအကျယ် ကြောက်ရွံ့တာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်သောကရောက်တာမျိုး ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စိတ်ဝေဒနာရှိတဲ့သူတွေဟာ လူအများနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတာ၊ လူအများအသုံးပြုနေတဲ့ အိမ်သာစတာတွေကို အသုံးပြုရတာ၊ လူအများရှေ့မှာ Presentations လုပ်ရတာမျိုးတွေတာ၊ လူအများအပြားရှိတဲ့ အစားအသောက်တန်းတွေမှာ စားသောက်ရတာ၊ လူအများအပြားနဲ့ အတူတကွ စားသောက်ရတာ၊ Public Area တွေမှာ ထိုင်ရတာ၊ အများသူငှာနဲ့ ပတ်သက်ရတာတွေကို ရှက်ရွံ့စိတ်သောကရောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေဟာ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ကိုယ့်ကို အားနည်းတယ်၊ နိမ့်ကျတယ်၊ ဉာဏ်ရည်နိမ့်ပါးတယ်၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုမရှိဘူး၊ မထိုက်တန်ဘူးလို့ တွေးမြင်ဆုံးဖြတ်ကြမှာကို စိုးရိမ်လွန်ကဲတတ်ကြသလို တစ်ဖက်သားက မိမိအပေါ် လေးစားမှုမပြသကြမှာကိုလည်း စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို တစ်ခြားတစ်ဦးတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် လူအများက လှောင်ပြောင်မှာ၊ ဟာသလုပ်မှာ၊ နှောင့်ယှက်ကြမှာကိုလည်း အထူးစိုးရိမ်တတ်ပြီး တစ်သီးတစ်သန့်နေရဖို့ အမြဲကြိုးပမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြုမူ နှောင့်ယှက်ခံရရင်လည်း စိုးရိမ်သောက ကြီးစွာရတတ်ပြီး စိတ်ဒါဏ်ရာအဆင့်အထိ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှလုံးခုန်နှုန်း ပြင်းထန်လျှင်မြန်လာတတ်ပြီး နှလုံးရောဂါဝေဒနာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။
အားနာတတ်တာနဲ့ Social Phobia က တူသလား
ယျေဘုယျ သဘောအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် မတူညီပါဘူး။ အားနာတတ်တာဟာ သူတပါး မိမိကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်တဲ့စိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာကို တွန့်ဆုတ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကြောင့် တဖက်သား စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်မှာကို ကြိုတင်စိုးရိမ်နေတာမျိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိအလွန်အကျွံထားမိနေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Social Phobia ကတော့ သူတပါးကြောင့် မိမိ ကိုယ်၊ စိတ်နှစ်ပါး ထိခိုက်ခံစားရမှာကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နှစ်ခုစလုံးဟာ မပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်အခံကို အခြေခံထားပြီး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကြုံရတာခြင်းတော့ တူညီပါတယ်။ နှစ်မျိုးနှစ်စားလုံးဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဝင်ဆန့်ဖို့ ရုံးကန်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ အကျပ်အတည်းတွေ့နေသူတွေချည်းဖြစ်ပါတယ်။
Social Phobia ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ
Social Phobia ဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင် “Fight or Flight” တုန့်ပြန်မှုမျိုးတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ရှက်ရွံ့လွန်ပြီး ရှောင်ပြေးသွားတာနဲ့ ကမူးရှူးထိုး ပြန်လည်တုန့်ပြန်တာမျိုးတွေပါ။ ဒီဝေဒနာစွဲကပ်နေသူတွေဟာ အလွန်းအမင်းစိတ်လှုပ်ရှားလာချိန်တွေမှာ မူးဝေတာ၊ ချွေးပြန်တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အေးစက်လာတာ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ဆန်တာ၊ မျက်နှာနီမြန်းလာတာ၊ အသက်ရှူကျပ်လာတာ၊ လည်ပင်းနဲ့ မျက်နှာက ကြွက်သားတွေ တင်းမာလာတာ၊ ဗိုက်အောင့်လာတာ၊ ကြွက်တက်တာ၊ စကားတွေထစ်တာ၊ ပြောမထွက်တာ၊ ရုတ်တရက် သိထားတာတွေ မေ့သွားတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြသပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားရနိုင်ပြီး ကြောက်ရွံ့မှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ဒီလို ဝေဒနာမျိုးရှိနေတယ်၊ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ သိရရင် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးသင့်တာကတော့ နွေးထွေးပြူငှာစွာ ဆက်ဆံတာပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ Social Phobia ဝေဒနာရှင်တွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ အားနည်းသူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ အသက်ရှှုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပြီး သူစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့တဲ့ ကိစ္စအကြောင်းကိုလည်း နားထောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ သူ့ စိတ်ထဲက အကြောက်တရားတွေကို ဖွင့်ဟစေပြီး နားထောင်ပေးတာကလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ WHO က ဆိုထားပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ မှားယွင်းတဲ့ ဆက်ဆံပုံမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံမိမယ်ဆိုရင် ဝေဒနာရှင်ဟာ Specific Phobia (သီးသန့် တစ်စုံတစ်ရာကို ကြောက်ရွံ့တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ)၊ Schizophrenia (စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ) ၊ Delusional Disorder (ထင်ယောင်ထင်မှား စိတ်ဝေဒနာ) တွေပါ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တာမို့ အထူးဂရုပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ)
မိန်းမတွေကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း စိတ်ဝေဒနာ (Gynophobia)
မင်း ဘာကိုရွေးပြီး ကြောက်နေမှာလဲ (Phobias)
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ 24, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 24, 2020
Nomophobia (သို့မဟုတ်) မသိမသာကူးစက်ခံနေရတဲ့ ကပ်ဘေး
အောက်စီတိုစင် (သို့မဟုတ်) အချစ်ဟော်မုန်း
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ဆံသားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ
ပူပင်သောကများရင် ဘာလို့ ဆံပင်တွေ ဖြူကုန်တာလဲ
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး, ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းများ